यो तपाईंको युद्ध अनुहार लगाउने समय हो Martech Zone
यो तपाईंको युद्ध अनुहार लगाउने समय हो
शनिबार, डिसेम्बर 20, 2008 आइतबार, मे 29, 2016 Douglas Karr
त्यहाँ एक बिक्री व्यक्ति र एक करीबी बीच भिन्नता छ। म विश्वास गर्छु म एक महान छु विक्रेता, तर एक भयानक नजिक। मलाई थाहा छ मैले धेरै ठूला सments्लग्नताहरू बेचेको छु, तर म धिक्कारेको मान्छे कहिल्यै थिएन मसी (सम्झौता हस्ताक्षर)। म सम्झौताको आकारमा पछाडि धकेल्न वा भविष्यमा साइन इन गर्न सम्भवताको लागि दबाब लागू गर्न मन पराउँदिन। धन्यबाद, म मेरो काममा प्रतिभाले घेरिएको छु जसले ती अवसरहरूको स्वाद लिन्छन्।
हाम्रा क्लोजरहरू चाँडै ग्राहकसँग अवसरहरू पहिचान गर्न सक्षम छन्, हाम्रो आवेदनको फाइदाहरू, र बिक्री पूरा गर्न आवश्यक दबाब लागू गर्दछ। त्यो हेरफेर जस्तो लाग्न सक्छ - म सहमत छु यदि हामी सोच्दैनौं कि हामी वास्तवमै हाम्रो ग्राहकहरूको सफलता बदल्दै छौं।
हामीले पत्ता लगायौं कि ठूलो संलग्नता र जति चाँडो हामी शुरू गर्छौं हाम्रो ग्राहकको लगानीमा छिटो फिर्ती - त्यसैले हामी दुबै दीर्घकालीनमा खुसी छौं। हामीले यसको विपरित पनि पहिचान गरेका छौं - हाम्रा साना ग्राहकहरूलाई दुबै ध्यान आवश्यक पर्दछ र नतिजा चाँडै आउँदैन। ठूलो ग्राहकले हप्तामा मूल्य देख्न सक्दछ, सानो ग्राहकले महिनौं लिन सक्दछ।
मन्दीको भार हामीमाथि पूर्ण रूपमा हामीसँग कम्पनीहरुसंग चुनौती छ कि जोसँग डलरको बर्ष बन्द छ, तर उनीहरुका लगानीमा हामीलाई विश्वास गर्न बाध्य हुनुपर्दछ। कम्पनीहरूले बरु कुनै पनि खर्च गर्दैनन् र यो गुमाउने सम्भावनाको साथ पैसा खर्च गर्नु भन्दा कुनै वृद्धिको जोखिम गर्दैनन्।
यो जब तपाईंलाई आवश्यक हुन्छ नजिक। नजिक छैन मूल्यहरु काट्नुहोस् बिक्री प्राप्त गर्न, तिनीहरूले तिनीहरूकोमा राखे युद्ध अनुहार र बिक्रीलाई बन्द गर्न को लागी संभावना लाई चुनौती दिनुहोस्।
यो हप्ता मैले यो कार्यमा देखेको छु। हामी त्यस्तो प्रॉस्पेक्टसँग काम गर्दैछौं जुन हाम्रो ब्लगिंग प्लेटफर्मबाट बिलकुल फाइदा हुन्छ, तर तिनीहरू हस्ताक्षर गर्दा खुट्टा तान्दै छन्। सम्झौता आकार तिनीहरूको समग्र बजेटको अंश हो त्यसैले यो कुनै ब्रेनर छैन। लगानीमा फिर्ती उनीहरूको अन्य प्रयासहरूको तुलनामा धेरै गुणा हुनेछ।
हाम्रो नजिक उनको राख युद्ध अनुहार र लडाई गर्न गए। उसले उनीहरूको हालको रणनीति अनुसन्धान गर्‍यो र यो सम्भावना सम्झायो कि उनीहरूले रणनीतिमा धेरै समय र उर्जा खर्च गरिसकेका छन जसले उनीहरूलाई कुनै परिणाम ल्याएको छैन ... नाडा… र हामी भिन्न थियौं। सही प्रश्नको साथ कुराकानीको नजिकै छोडियो, "के तपाईं आफ्नो असफल रणनीति जारी राख्न चाहानुहुन्छ, वा हामीसँग विजयी रणनीतिमा लगानी गर्नुहुन्छ? '। बन्द!
कठोर लाग्दछ, तर यी कठिन समयहरू हुन्। कम्पनीहरूले उनीहरूको २०० bud को बजेट अहिले भर्दैछन त्यसैले तपाईंलाई प्लाकेट गरिएको छ कि बिक्री तपाईंको आउँदैछ र मन्दी कुनै ठूलो कुरा होइन।
२०० In मा, तपाईले आफ्नो युद्धको अनुहार अझ राम्रोसँग राख्नु भएको छ किनकि तपाईले बजेट डलरका लागि लड्नु पर्ने छ जुन अवस्थित नहुन सक्छ! निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले क्लोजरहरू भाडामा लिनुभयो - विक्रेताहरू होइन - र तपाईं लुकिछिपी बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ। हाम्रो बिक्री स्टाफको प्रतिभा अहिले हाम्रो रेकर्ड ग्रोथलाई धक्का दिने कुरामा ठूलो हिस्सा हो र हामीलाई २०० in मा निरन्तर वृद्धि प्रदान गर्दछ।
टैग: बन्दपूर्ण धातु ज्याकेटप्रत्याशाबिक्री संचारबिक्री सक्षमतायुद्ध अनुहार
के गुगल कूकी क्रम्बलिंग हो?
कठिन रियल इस्टेट मार्केटमा मार्केटिंग
सानो व्यापार मार्केटिंग
डिसे 22, 2008 मा 12: 38 AM
हुनसक्छ यो राम्रो तरिकाले शरीर कवच धारण गर्न को लागी एक युद्ध अनुहार विपरीत जो ग्राहकहरु डराउने को विरोध मा राख्नु पर्छ। क्लोजिंग ग्राहकको लागि कष्टकर हुनुपर्दैन।
डिसे 22, 2008 मा 12: 49 AM
शारीरिक कवचले बिक्री बन्द गर्न मद्दत गर्दैन, SBM! म एक सम्भावित डराएको वा डराएको चाहन्न। डर एक पक्षाघात भावना हो - विशेष गरी व्यवसाय मा।
यसको विपरित, म उनीहरूलाई आश्वस्त हुन चाहन्छु। हामीले यस अर्थव्यवस्थाको साथ देखेको समस्या यो हो कि व्यवसायहरू पछि समातिएका छन - जबकि यो उनीहरूको उत्तम हितमा अगाडि बढ्न हो। बिक्री कि डर को माध्यम बाट लड्न पर्छ।
वार्तालाप थप्न को लागी धन्यवाद।
डिसेम्बर १, २०१ 22 2008:२:4 अपराह्न
खुसीको कुरा हो कसैले कसैले वास्तविक संसारमा व्यवसायको बारेमा कुरा गरेको सुन्न पाउँदा खुशी छ। मैले सुनें सबै यो ट्विटर हो, र फ्रेन्डफिड त्यो हो, र मार्केटिंग सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरू मार्फत। मलाई विश्राम दिनुहोस्, धेरै जसो व्यावासायिक मालिकहरू ट्वीटरमा एकदम व्यस्त छन्, उत्पादनको रूपमा बेच्ने कम्पनीहरूको रूपमा, तपाईंले बिक्रीको प्रक्रियालाई अन्तबाट अर्को छेउसम्म बुझ्नुपर्दछ, र त्यसमा क्लोजिंग पनि समावेश छ, र समापन एक कला हो, जहाँ तपाईं डराउन सक्दैन। याद गर्नुहोस्, उनीहरूले भन्न सक्ने सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो, होईन, र त्यो हो केवल एक हो YES को नजिकै छैन !!!!
धन्यवाद प्रेस्टन! तपाईं सहि हुनुहुन्छ - यो तपाईंको उत्तम संसाधनहरू लगानी गर्ने बारेमा हो जहाँ उनीहरूलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक हुन्छ।
डिसेम्बर १, २०१ 22 2008:२:6 अपराह्न
मेरो मार्केटिंग गुरुहरूसँग उनीहरूको सेठ गोडिन सहितको प्रश्न छ कि तपाईंको उत्पादनलाई मार्केट गर्न के गर्न सकिन्छ जुन सानोदेखि मध्यम आकारको स्थानीय व्यवसायमा पुग्नेछ? अब, म तिमीलाई पृष्ठभूमिको एक बिट दिन चाहन्छु, म वित्तीय सेवा उद्योग मा काम गरेको छु लगभग १ years बर्ष को लागि NYC मा। मेरो काम विशेष रूपमा पैसा उठाउनु र यसलाई व्यवस्थित गर्नु थियो। मैले दुईवटा माध्यमबाट ब्यवस्थित लाखौंलाई स raised्कलन गरेको छु: व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको लागि होस्टिंग सेमिनारहरू, र सार्वजनिक ट्रेडिंग कम्पनीहरूका कोल्ड-कलिंग अधिकारीहरू। मेरो सबैभन्दा ठूलो खाता mil 17 मिलियन थियो ... कुनै ठट्टा थिएन। अब, मसँग एक वेब डिजाइन कम्पनी छ जुन साइट डिजाइन गर्दछ जुन and up,००० भन्दा बढी खर्च हुन्छ। के सल्लाह दिईन्छ जसले मलाई अधिक व्यापार मालिकहरू भेट्न र बन्द गर्न सक्षम गर्दछ? मैले प्रति क्लिक भुक्तान गर्न प्रयास गरें, बेकार। सामाजिक मिडिया नेटवर्कि… ... हो, यो हो जुन म G लाई G (गुरुदेखि गुरु) भन्छु। कोल्ड-कलिंगले मेरा सबै ग्राहकहरू ल्याएको छ, मुख को वचन बाहेक। मलाई नयाँ र नयाँ स्लेन्ट दिनुहोस् ...।
ओहो, कृपया माफ गर्नुहोस् "तिनीहरूको" typo… "" त्यहाँ हुनु पर्छ